69 → 78 of 1729 results First • Previous • Next • Last
Language selection no longer possible
ဘာသာစကား ရွေးချယ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
Translated by jsmith201012 on 2011-07-31
Reviewed by Pyae Sone on 2012-03-07
At this point it is no longer possible to change the language for the installation, but you can still change the country or locale.
ဤအဆင်.တွင် ထည်.သွင်းခြင်းကိစ္စအတွက် ဘာသာစကား ပြောင်းလဲဖို. မဖြစ်နိုင်တော.ပါ။ ဒါပေမဲ. နိုင်ငံ သို.မဟုတ် လိုကေးကိုတော. ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးသည်။
အခြားဘာသာစကားတခု ရွေးချယ်ရန် ဤထည့်သွင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပြစ်ပြီး installer ဆော့ဝဲလ်ကို အစမှ ပြန်လည်စတင်ရန် လိုအပ်သည်။
Translated by Battoe19 on 2011-08-08
ဤရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားနဲ. ထည်.သွင်းခြင်းကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါမလား။
အင်စတော်လာ ဆော.လ်ဝဲကို ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားသို. ဘာသာပြန်ခြင်း မပြည်.စုံသေးပါ။
Installer ဆော့လ်ဝဲကို ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားတစ်ခုထဲသို့ ဘာသာပြန်ခြင်း မပြီးသေးပါ။
Translated and reviewed by Battoe19 on 2011-08-08
ထို့အတွက်ကြောင့် အချို့စာသားများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြသဖို့ အခွင့်အလမ်းများသွားသည်။
Translated and reviewed by Pyae Sone on 2012-03-07